Uyikhuthaza njani i-Craft Beer-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Uyikhuthaza njani iBhiya yobugcisa
Ixesha: 2020-10-27 I ngxelo: 53
Ngokwembali, ibhiya ibisoloko inxulunyaniswa nobomi be-Times ukusukela ekuzalweni kwayo, ukusukela kwixesha langoku, ilizwe liyile inkcubeko ekhethekileyo yobhiya, ukongeza, uninzi lweembono zabathengi malunga nebhiya ziyathandana, kwaye ibhiya isempilweni kakhulu kwaye isiselo esinomdla.
Ukuqaqambisa inkcubeko "yokonwabela" ibhiya, ukwahlula ibhiya ayisiyonto ilungileyo yokwenza ibhiya, kufuneka ibaluleke ngakumbi, ukunxibelelana nabathengi, ngendlela "evulekileyo", ibhiya yolwazi lobungcali oludluliselwe abathengi, utshintsho kwimarike yokungaqondani kwebhiya, ngaxeshanye ukwenza abenzi nokusasaza isasaza isiko. Ukutsha kwebhiya kubaluleke kakhulu. Ngaphandle kokuxelela abathengi indlela yokungcamla ngokuchanekileyo ibhiya, abathengi kufuneka baxelelwe nokuba eyona bhiya intsha ikwindawo efanelekileyo yeyona ilungileyo.
Njengoko sonke sisazi, ukukhula okukhawulezileyo kwebhiya yobugcisa kuveze iingxaki ezininzi Ukuze kuphuculwe uphuhliso lwebhiya yobugcisa, iKomiti yoBuchule yaseChina yoMbutho woShishino lokutya sele ifuna ukumisela imigangatho efanelekileyo yeshishini, ichaze ngokuchanekileyo umxholo ubhiya wobugcisa, kwaye unike ishishini lobugcisa lobugcisa lase China ngokubhekisele kwimathiriyeli ekrwada, itekhnoloji, incasa kunye nezinye izinto.
Previous: Ukusetyenziswa kwasekhaya kunye noVavanyo lwezixhobo zokupheka izixhobo ziya kukhutshwa
Okulandelayo: Imbono yeeHops